COVID-19: Dhammaanteen waan wada joognaa, laakiin dunidu sidaas uma dhaqmayso
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » COVID-19: Dhammaanteen waan wada joognaa, laakiin dunidu sidaas uma dhaqmayso
Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Agaasimaha Guud ee WHO ee saadaasha COVID-19
Tirada caabuqa COVID-19 ee la duubay ayaa kor u dhaaftay 200 milyan usbuucii hore, kaliya 6 bilood kadib markay dhaaftay 100 milyan. Heerkaan, dunidu waxay dhaafi kartaa 300 milyan horraanta sannadka dambe ayuu yiri Agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
In kasta oo ay jiraan dhowr tallaal oo la heli karo, tirada kiisaska cusub iyo dhimashada ayaa sii kordheysa adduunka oo dhan.
Lambarada waxaa si gaar ah u saameeya kala duwanaanshaha Delta sababtuna waa sifooyinkiisa aadka loo gudbin karo.
In kasta oo qof kastaa had iyo jeer ka hadlayo sidii loo gaadhi lahaa xasaanad lo ', haddana Agaasimaha Waaxda Tallaalka ee WHO wuxuu sheegay inaysan jirin "lambar sixir."
Wuxuu intaas ku daray in saadaasha la socota cagaha hoose ee ah in tirooyinkani ay dhab ahaantii yihiin kuwa aan la qiyaasi karin oo wax kasta oo laga gudbo fayraskan ay qaadi doonaan tallaabo adag.
Tedros wuxuu yiri, "Dhammaanteen waan wada joognaa, laakiin dunidu sidaas uma dhaqmayso."
Wuxuu ka xumaaday in kasta oo ay jiraan dhowr tallaal oo la heli karo, tirada kiisaska cusub iyo dhimashada ayaa sii kordhaysa, gaar ahaan ay saamayn ku yeelatay goor dambe oo kala duwanaanshaha Delta ah iyo astaamihiisa aadka loo gudbin karo.
In kasta oo qof kastaa had iyo jeer ka hadlayo helitaanka xasaanad lo ', haddana Agaasimaha Ururka Caafimaadka Adduunka Waaxda Tallaalka, ayaa sheegtay inaysan jirin “lambar sixir”. Waxay sharraxday: “Runtii waxay la xiriirtaa sida fayraska loo kala qaado. Waxa ku dhacay coronavirus… Tani waa aag hubin la’aan xagga sayniska ah. ”
Tusaale ahaan, jadeecadu aad bay u faaftaa oo ku dhawaad ​​95% dadku waa inay isdifaacaan ama tallaalaan si uusan u faafin. In kasta oo aan si buuxda u aqbalnay in la tallaalo jadeecada illaa heer ah in tusaale ahaan Ameerika dhallaanka lagu tallaalo markay jiraan 12 bilood, haddana cusaybka COVID-19 wuxuu dadka ka dhigayaa mid aan caqli-gal ahayn ama cabsan ama labadaba. Waxaa jira kuwo aad u badan oo aan ku kalsoonayn in aan loo isticmaalin sidii doofaarrada guinea si loo tijaabiyo waxtarka “tallaalkan cusub ee fangaska ah.” Dhanka kale, the Tirada dhimashada adduunka oo dhan COVID-19 ayaa gaadhay 4,333,094 maanta.
Kuwa ku dhaca fayraska, rajadu waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in saraakiisha WHO ay sheegeen in cilmi-baaris dheeraad ah lagu sameynayo daaweynta COVID-19. Tijaabo aan hore loo arag oo wadamo badan leh oo lagu magacaabo Solidarity Plus ayaa eegi doonta waxtarka 3 daawo oo cusub 52 dal.